असार ११, २०७७ शिवनाथ यादव
विश्व नै कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को महामारीमा छ । देशमा लकडाउनको अवस्था छ । लकडाउन धेरै दिन भए पछि कष्टकर बन्दै गाएको जीवन सहज बनाउन, ठप्प परेको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको छ । लकडाउन खुकुलो बनाउनुको अर्थ सावधानी नअपनाउनु भने होईन । लकडाउन खकुलो बनाउनुको अर्थ कोरोना भाईरस संक्रमणको अवस्था नभएको होईन । कोरोनाको महामारी हटेको अवस्था होईन ।
बाहिर निस्किदाँ सरकारले वा विश्व स्वास्थ्य संठनले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । आवश्यक काम परेको बेला मात्र निस्कने हो । आम भेला गर्ने, कार्यक्रमको उद्धघाटन र समापन गर्ने होईन तर यहाँ त असारे विकासले कोरोनाको कुरा विर्सेको जस्तो छ । कोरोना भाईरसले हाम्रो जिवनमा धेरै परिवर्तन ल्याएको छ । काम गर्ने शैली, बस्ने खाने शैली परिवर्तन गरेको छ तर असारे विकासको मोडेललाई परिवर्तन गर्न सकेको छैन । जेठ विकास निर्माणको काम गर्दा रोक्ने भाईरसले असारमा काम गर्दा रोक्न सकेको छैन । असार लाग्नै लाग्दा शुरु भएको असारे विकासको अभियान असारको गते बढदै गएसंगै जनप्रतिनिधिको व्यवस्तता पनि बढाएको छ । वडाअध्यक्ष देखी मुख्यमन्त्री सम्मले आफनो क्षेत्रको विकासमा लाग्नु भएको छ ।
विकास निर्माणको कामको अनुगमनमा जम्बोटोली सहित निस्कनु भएको छ । मेयर साहेव जग खनेर उद्धघाटन कार्यक्रम राख्नु भएको छ, प्रदेश मन्त्रीले फिता काटेर सडक ढलानको उद्धघाटन गर्नु भएको छ । के साच्चिकै असारे विकसको ताकतले कोरोना संक्रमणलाई विर्साएकै हो ? खोई त हाम्रो शर्तकता ? खोई त सरकारको नीति पालन ? के उद्धघाटन गर्नै पर्ने हो ? उद्धघाटन र अनुगमनमा जाँदा लावालस्कर देखाउनै पर्ने हो ? खोई त हाम्रो शर्तकता ?
व्यवस्था परिवर्तन भयो तर व्यवहार परिर्तन भएन । बर्ष भरी हुन नसकेका विकास निर्माणको कामलाई असार भत्र सिध्याउनु पर्ने हाम्रो नियम हो की नियत हो आम जनातले बुझन सकेका छैनन । यस्तो संक्रमणको बेला त तीन तहका सरकारका प्रतिनिधिले असारे विकास भन्दा पनि आवश्यतामा आधारित विकासको काममा लाग्नु पर्ने होईन र ? आम जनतालाई सचेत गाउनु पर्ने खण्डमा आफैले भिडभाड गर्दै हिडने, शर्तकता नअपनाउने र संक्रमण फैलिन सक्ने कामलाई बढावा दिने काम गर्नु हुदै यस तफ हाम्रा जनप्रतिधिहरुको ध्यान जान जरुरी छ । विकास निर्माणको काम असारमा मात्र हुन्छ भन्ने धारण कहिले परिवर्तन हुने ? असारमा गरिएको विकास कतिको टिकाउ हुन्छ ?कतिको आवश्यता छ यस तर्फ हाम्रो कहिले जाने ?
दिन प्रति दिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढी रहेकै छ । जोखिम कम भएको छैन । सम्बन्धित निकायले अझ बढन सक्ने आंकलन गरिरहेको बेला विकास निर्माणको बहानामा जोखिम बढाउनु कतिको जायज छ ? हाम्रा जनप्रतिनिधिले नै संक्रमण रोक्ने उपाय अपनाएन भने आम जनतामा के सन्देश जान्छ । आम जनताले यसलाई कसरी लिने हो ? एकातिर सरकारले नीति नियम ल्याउने, भीडभाड गर्नु हुदै भनेर सन्देश दिने, आम नागरिकलाई कार्वाही तर ठुलबडालाई कावार्ही किन गर्ने ? अहिलेको अवस्था भनेको आफनो पछाडी भिडभाड देखाउने होईन । विकासको निर्माण गर्दा उद्धघाटन कार्यक्रमको आयोजना गर्ने होई बरु कुन काम हो ? कति लागत हो ? कहिले सकिने हो ? को हो जिम्मेवार व्यतिm लगायतको सुचना बोड राखेर पारदर्शि बन्ने समय हो ।
हाम्रो समाजमा रहेको औपचारिक कार्यक्रम र भाषण गर्ने प्रवृति हटाउने समय हो ? यस्ता परम्परालाई हटाउने समय हो तर खोई त हाम्रा जनप्रतिनिधिको ध्यान यस तर्फ गएको ? खोई विकास निर्माणको काममा शर्तकता अपनाएको ? कोरोनो महामारीे खोई त असारे विकासलाई असर गरेको ?
#असारे विकास #विकास निर्माणका काम
बिहिवार, असार ११, २०७७, ०२:०६:००
पर्सामा एचआईभी संक्रमित ३५ वर्षिय युवकको काेराेनाले मृत्यु
भदौ १३, २०७७ शिवनाथ यादव
लकडाउनले सास्ती खेपिरहेका वीरगंजेली, समान्य अवस्थामा सेना परिचालन गर्दा समाजिक सञ्जालमा चैतर्फि आलोचना
भदौ १, २०७७ शिवनाथ यादव